Iindiza ezisuka eMoscow ziye eHurghada naseSharm El Sheikh eAeroflot ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza ezisuka eMoscow ziye eHurghada naseSharm El Sheikh eAeroflot ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ngokweshedyuli ebhengeziweyo, iAeroflot iya kusebenza ngenqwelomoya ukusuka eMoscow ukuya eHurghada naseSharm el-Sheikh yonke imihla, ukuqala nge-1 ka-Okthobha ka-2021.
Umphathi weflegi waseRussia ubhengeza iindiza ezicwangcisiweyo eziya eLwandle oluBomvu iidolophu zokungcebeleka.
I-Aeroflot iza kusebenza neenqwelomoya zeHurghada kunye neSharm el-Sheikh yonke imihla.
Iinqwelomoya zeHerghada kunye neSharm el-Sheikh ziya kusebenza eMoscow.
Iflegi yaseRussia iAeroflot ikhuphe ukubhengezwa namhlanje okuphehlelele ukuthengisa amatikiti eenqwelo moya ezicwangcisiweyo ezivela eMoscow, eRashiya ukuya kwiindawo ekuchithelwa kuzo uLwandle oluBomvu zase-Hurghada naseSharm el-Sheikh.
Ngokweshedyuli ebhengeziweyo, iAeroflot iya kusebenza ngenqwelomoya ukusuka eMoscow ukuya Hurghada kunye Sharm el-Sheikh yonke imihla, ukuqala ngo-Okthobha 1, 2021.
Ukusukela nge-27 ka-Agasti, iRussia iliphindaphinde kathathu inani leenqwelo moya eziya eYiphutha kwiindlela zaseMoscow-Hurghada naseMoscow-Sharm el-Sheikh - ukusuka kwi-5 ukuya kwi-15 yenqwelomoya ngeveki kwindlela nganye elandela isigqibo sekomkhulu elisebenza ngokubambisana. I-COVID19.
Ngokwe-Arhente yoThutho loMoya yase-Federal, iinqwelomoya ze-XNUMX, kubandakanya Aeroflot, Ndifumene ithuba lokuqhuba iinqwelomoya kwezi ndlela, ukongeza kwiRossiya. Ngaphambili, iAeroflot ibingasebenzi ngenqwelomoya rhoqo kwezi ndawo.
I-PJSC I-Aeroflot-I-Russian Airlines, eyaziwa njengeAeroflot, ngumphathi weflegi kunye nenqwelomoya enkulu yeRussian Federation. I-airline yasekwa ngo-1923, isenza iAeroflot yenye yeenqwelo moya ezindala kunazo zonke ehlabathini.
I-Aeroflot izinze kwi-Central Administrative Okrug (kwiSithili), eMoscow, kunye nehabhu yayo ibe yiSheremetyevo International Airport. Inqwelomoya iyabhabha iye kwiindawo ezili-146 kumazwe angama-52, ngaphandle kweenkonzo zokunxibelelana.